Waxbarashada dalalka soo koraya oo loogu deeqay balaayiin doolar - BBC News Somali
Waxbarashada dalalka soo koraya oo loogu deeqay balaayiin doolar
4 Febraayo 2018
Image caption Arday Kenyaan ah oo imtixaan u fadhiya
Hogaamiyayaasha caalamka ee ka qeybqaadanaya shir caalami ah oo ka soconaya waddanka Senegal ayaa waxa ay ku deeqeen in ka badan 2.3 bilyan oo doolar si sare loogu qaado dhaqaalaha lagu bixiyo waxbarashada dalalka soo koraya.
Dadka soo qabanqaabiyay shirkaasi ayaa waxa ay sheegeen in kharashkaasi ay ku deeqeen wadammada deeqda bixiya uu yahay mid aad u sarreeya markii la barbar dhigo 1.3-da bilyan ee doolar ee waxbarashada lagu bixiyay saddexdii sanno ee la soo dhaafay.
Dalalka soo koraya ayaa la ahaantooda waxa ay ballan qaadeen inay kordhin doonaan lacagta ay ku bixiyaan waxbarashada.
Kharashka ugu badan ee lagu deeqayna waxaa ku yaboohay Britain, Midowga Yurub iyo Norway.
Madaxa hay'adda caalamiga ah ee shirkaasi soo qabanqaabisay Alice Albright ayaa sheegtay in taageerada aan caadiga ahayn ay ka dhigan tahay in dhaqaalaha lagu caawin doono ku dhawaad sagaashan dal oo caalamka ku yaal.